တချို့က အောင်မြင်ကြပြီး တချို့က ဘာလို့ မအောင်မြင်ကြတာလဲ……. - Barnyar Barnyar
တချို့က အောင်မြင်ကြပြီး တချို့က ဘာလို့ မအောင်မြင်ကြတာလဲ…….
လောကမှာ လူနည်းစု တစ်ချို့ကပဲ အောင်မြင်ကြပြီး အများစုက မအောင်မြင်ကြဘူး …. ။ ဘာကြောင့်လဲ? —–
အောင်မြင်သူသည် မိမိ ဘာကို အလိုရှိကြောင်း ကောင်းစွာသိသည်။ အလိုရှိရာကို ရယူရန် နည်းလမ်း အကြံအစည်လည်း ရှိသည်။ မိမိ၌ ရယူနိုင်စွမ်း ရှိသည်ဟုလည်း ယုံကြည်သည်။ ပြီးတော့ မိမိ နေ့စဉ် ဘဝ၏ အချိန်ကာလ အများစုကို မိမိလိုရာ ရရှိရေး ကိစ္စထဲမှာပဲ နှစ်မြုတ် သုံးစွဲသည် ။
မအောင်မြင်သူ၌ ဘဝ ရည်မှန်းချက် တိတိကျကျ မရှိ။ အောင်မြင်မှု မအောင်မြင်မှု ဟူသည် ကံအကြောင်း တရားသာ ဖြစ်သည်ဟု သူ ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာသည့် အခါမျိုး မှတစ်ပါး ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ ထုတ်လေ့မရှိ ။
အောင်မြင်သူသည် စည်းရုံးရေးသမားကောင်း ဖြစ်သည်။ မိမိ ပစ္စည်း မိမိအလုပ်ကို အစွံထုတ် ရောင်းချတတ်သူ ဖြစ်သည်။ မိမိလုပ်ငန်း အစီအစဉ်တွင် သူတစ်ပါးတို့ အားတက်သရော ဝိုင်းဝန်း ပါဝင်လာအောင် စည်းရုံး သိမ်းသွင်း တတ်သူ ဖြစ်သည်။
မအောင်မြင်သူက အပြစ်ရှာသမား ဖြစ်သည် ။ တစ်ဖက်သား စေတနာပျက်အောင် လုပ်သူမျိုး ဖြစ်သည်။ မိမိနှင့်ဆက်ဆံရသူ မှန်သမျှထံ အဆိုးမြင်စိတ်တွေ ကူးစက် ပျံ့နှံ့အောင် သူအားထုတ် နေတတ်သည်။
အောင်မြင်သူသည် စဉ်းစားပြီးမှ စကားပြောသူ ဖြစ်သည်။ သူ့စကားလုံးတွေကို အလွန် ချင့်ချိန်သည်။ တစ်ဖက်လူများနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်သက်စရာ ချီးကျူးစရာများကို အထူးဂရုပြု ဖော်ထုတ်သည်။ မိမိ မနှစ်သက်သည်ကို တတ်နိုင်သမျှ သိမ်းဆည်း သိုသိပ်သည်။ ဝေဖန် ပြစ်တင်စကား မဆိုမိအောင် သတိထားသည်။
မအောင်မြင်သူက ၎င်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်။ မစဉ်းစား စကားတွေ ပြောမည်။ သူ့စကားကြောင့် တစ်ဖက်လူ စိတ် ထိခိုက်ရမည်။ မိမိကို မုန်းတီးစေမည်။ အဲ့သည်က ဆင့်ပွားလာသည့် ဆိုးကျိုးတွေကို မိမိပင် တစ်နေ့ ခံစားရမည်။
အောင်မြင်သူသည် အကြောင်းကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံ လုံလောက်စွာ သိရှိပြီးသည့် အခါမှသာ ယင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မိမိအမြင်ကို သူတစ်ပါး ရှေ့၌ ကျိုးကြောင်း သင့်မြတ်စွာ တင်ပြပြောဆိုသည်။
မအောင်မြင်သူက သေချာစွာ စူးစမ်း လေ့လာမှု မပြုဘဲ ဝေဖန်မည်။ မှတ်ချက် ချမည်။ မိမိ လုံးဝ နားမလည်သည့် ကိစ္စကိုလည်း ဝင်ရောက် စွက်ဖက် ပြောဆိုမည်။
အောင်မြင်သူသည် အချိန်ကိုလည်းကောင်း ၊ ငွေကိုလည်းကောင်း စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲ သုံးစွဲသည် ။
မအောင်မြင်သူကား အချိန်ကို တန်ဖိုးမထား ။ ငွေကိုလည်း မလေးစား ။ ပစ်စလက်ခတ် ပရမ်းပတာ ဖြုန်းတီးပစ် တတ်သည် ။
တခြို့က အောငျမွငျကွပွီး တခြို့က ဘာလို့ မအောငျမွငျကွတာလဲ…….
လောကမှာ လူနညျးစု တဈခြို့ကပဲ အောငျမွငျကွပွီး အမြားစုက မအောငျမွငျကွဘူး …. ။ ဘာကွောငျ့လဲ? —–
အောငျမွငျသူသညျ မိမိ ဘာကို အလိုရှိကွောငျး ကောငျးစှာသိသညျ။ အလိုရှိရာကို ရယူရနျ နညျးလမျး အကွံအစညျလညျး ရှိသညျ။ မိမိ၌ ရယူနိုငျစှမျး ရှိသညျဟုလညျး ယုံကွညျသညျ။ ပွီးတော့ မိမိ နစေ့ဉျ ဘဝ၏ အခြိနျကာလ အမြားစုကို မိမိလိုရာ ရရှိရေး ကိစ်စထဲမှာပဲ နှဈမွုတျ သုံးစှဲသညျ ။
မအောငျမွငျသူ၌ ဘဝ ရညျမှနျးခကျြ တိတိကကြ မရှိ။ အောငျမွငျမှု မအောငျမွငျမှု ဟူသညျ ကံအကွောငျး တရားသာ ဖွဈသညျဟု သူ ယုံကွညျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မလှဲမရှောငျသာသညျ့ အခါမြိုး မှတဈပါး ကိုယျစှမျးကိုယျစ ထုတျလမေ့ရှိ ။
အောငျမွငျသူသညျ စညျးရုံးရေးသမားကောငျး ဖွဈသညျ။ မိမိ ပစ်စညျး မိမိအလုပျကို အစှံထုတျ ရောငျးခတြတျသူ ဖွဈသညျ။ မိမိလုပျငနျး အစီအစဉျတှငျ သူတဈပါးတို့ အားတကျသရော ဝိုငျးဝနျး ပါဝငျလာအောငျ စညျးရုံး သိမျးသှငျး တတျသူ ဖွဈသညျ။
မအောငျမွငျသူက အပွဈရှာသမား ဖွဈသညျ ။ တဈဖကျသား စတေနာပကျြအောငျ လုပျသူမြိုး ဖွဈသညျ။ မိမိနှငျ့ဆကျဆံရသူ မှနျသမြှထံ အဆိုးမွငျစိတျတှေ ကူးစကျ ပြံ့နှံ့အောငျ သူအားထုတျ နတေတျသညျ။
အောငျမွငျသူသညျ စဉျးစားပွီးမှ စကားပွောသူ ဖွဈသညျ။ သူ့စကားလုံးတှကေို အလှနျ ခငျြ့ခြိနျသညျ။ တဈဖကျလူမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ နှဈသကျစရာ ခြီးကြူးစရာမြားကို အထူးဂရုပွု ဖျောထုတျသညျ။ မိမိ မနှဈသကျသညျကို တတျနိုငျသမြှ သိမျးဆညျး သိုသိပျသညျ။ ဝဖေနျ ပွဈတငျစကား မဆိုမိအောငျ သတိထားသညျ။
မအောငျမွငျသူက ၎င်းငျးနှငျ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ။ မစဉျးစား စကားတှေ ပွောမညျ။ သူ့စကားကွောငျ့ တဈဖကျလူ စိတျ ထိခိုကျရမညျ။ မိမိကို မုနျးတီးစမေညျ။ အဲ့သညျက ဆငျ့ပှားလာသညျ့ ဆိုးကြိုးတှကေို မိမိပငျ တဈနေ့ ခံစားရမညျ။
အောငျမွငျသူသညျ အကွောငျးကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွညျ့စုံ လုံလောကျစှာ သိရှိပွီးသညျ့ အခါမှသာ ယငျးတို့နှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ မိမိအမွငျကို သူတဈပါး ရှေ့၌ ကြိုးကွောငျး သငျ့မွတျစှာ တငျပွပွောဆိုသညျ။
မအောငျမွငျသူက သခြောစှာ စူးစမျး လလေ့ာမှု မပွုဘဲ ဝဖေနျမညျ။ မှတျခကျြ ခမြညျ။ မိမိ လုံးဝ နားမလညျသညျ့ ကိစ်စကိုလညျး ဝငျရောကျ စှကျဖကျ ပွောဆိုမညျ။
အောငျမွငျသူသညျ အခြိနျကိုလညျးကောငျး ၊ ငှကေိုလညျးကောငျး စနဈတကြ စီမံခနျ့ခှဲ သုံးစှဲသညျ ။
မအောငျမွငျသူကား အခြိနျကို တနျဖိုးမထား ။ ငှကေိုလညျး မလေးစား ။ ပဈစလကျခတျ ပရမျးပတာ ဖွုနျးတီးပဈ တတျသညျ ။